Donation to Rakhine State for COVID-19
On 23 April 2020, Kyauk Phyu Electric Power Company Limited donated 22,200,000 Kyat worth of health-related items, including Personal Protective Equipment (PPE) suits, masks and medicine for Rakhine State, received by Yangon Region Minister for Rakhine Ethnic Affairs, U Zaw Aye Maung.
Kyauk Phyu Electric Power Company Limited isajoint venture between Powerchina, ranked #168 in the world, and locally owned Supreme Group of Companies. We are currently constructinga135MW Power Plant in Kyauk Phyu using high performing equipment from Europe.
ကျောက်ဖြူလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုမ္ပဏီမှရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ PPE ဝတ်စုံများ၊ maskများ၊ဆေးပစ္စည်းစုစုပေါင်း ကျပ် ၂၂၂ သိန်း လှူဒါန်းမှုကိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဦးဇော်အေးမောင်မှလက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။
ကျောက်ဖြူလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံး ၁၆၈ ရှိ Powerchina နှင့်မြန်မာတိုင်းရင်းသားပိုင် စူပရင်းကုမ္ပဏီတို့ဖက်စပ်တည်ထောင်ထားပြီးကျောက်ဖြူမြို့တွင် ၁၃၅ MW လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုစွမ်းအားမြင့်ဥရောပစက်များကိုအဓိကအသုံးပြုတည်ဆောက်လျှက်ရှိပါသည်။